အိမ်မက်များကို ရှာဖွေခြင်း - မောငျပေါကျ ( Maung Pauk )
Home ဗဟုသုတ အိမ်မက်များကို ရှာဖွေခြင်း
Anonymous at 2:30:00 PM ဗဟုသုတ,
သင့်မှာ ထက်သန်တဲ့ အိမ်မက်တစ်ခုရှိပါသလား? အိမ်မက်ကို လက်တွေ့အဖြစ် ဘယ်လိုပြောင်းလဲအသုံးချရမလဲဆိုတာကိုရော သိပါသလား?
ကဲပါ.. သင့်ဘဝမှာ ဘာကို ဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်ချင်မှန်း ရေရေရာရာမရှိသေးဘူးဆိုရင်တော့ ဒီအဆင့် (၄) ဆင့်နဲ့ သင့်ရဲ့အိမ်မက်တွေကို ရှာဖွေလိုက်ရအောင်ဗျာ။
ဘာမှမလုပ်သေးခင်မှာ အရင်ဆုံး စဉ်းစားပါတဲ့။ စဉ်းစားဆိုတာ ကိုယ်ဘာဖြစ်ချင်လဲဆိုတာ သေချာသိအောင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ရှာဖွေရမှာပါ။ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာကို သိပြီဆိုရင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းကို ထပ်ပြီးတော့ စဉ်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
စဉ်းစားရင်းနဲ့ ဘာဖြစ်ချင်လဲဆိုတာသိပြီ။ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုလည်း သိပြီဆိုရင်တော့ ဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့ ယုံကြည်ပါ။ ကိုယ်လုပ်မယ့်အရာတစ်ခုကို ဒီအတိုင်းအလုပ်ဖြစ်ရုံလုပ်လိုက်တာနဲ့ ပြင်းပြတဲ့ ယုံကြည်စိတ်ကို အရင်းခံပြီး လုပ်လိုက်တာနဲ့ ဘာကွာသွားလဲဆိုတော့ ခရီးတစ်ခုကို စက်ဘီးနဲ့သွားတာနဲ့ မော်တော်ကားနဲ့ သွားတာနဲ့ ကွာသလိုကို ကွာသွားတာပါ။ လဲပြိုကျသွားတဲ့အခါမှာလည်း ထက်သန်တဲ့ ယုံကြည်စိတ်တစ်ခုက အရာရာကို တည့်မတ်ပေးသွားပါလိမ့်မယ်။
စဉ်းစားမယ်။ ယုံကြည်မယ်။ ပြီးရင်တော့ အိမ်မက်တွေအဖြစ် ပြောင်းလဲလိုက်ပါတော့။ သင့်ရဲ့အိမ်မက်ဆိုတာ သင့်ရဲ့အနာဂတ်လည်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်လျှောက်ရမယ့် ဦးတည်ချက်၊ လမ်းလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်မက်တွေကို အကောင်အထည်ဖော်နေရတယ်ဆိုတဲ့ ခံစားချက်ကလည်း သင့်ဘဝကို အဓိပ္ပာယ်ရှိစေတဲ့ ခံစားချက်မျိုး ဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။
ဘာဖြစ်ချင်လဲဆိုပြီး စဉ်းစားလိုက်တဲ့အဆင့်ကနေပြီးတော့ သင့်အတွက် အိမ်မက်တစ်ခုရှိလာတယ်ဆိုတဲ့ အဆင့်တစ်ခုကို ရလာတဲ့အခါမှာတော့ လုပ်ကိုင်ရဲတဲ့ သတ္တိတစ်ခုကို မွေးရပါတော့မယ်။ တိုက်ခိုက်ရဲတဲ့ စစ်ဘုရင်ပဲ စစ်ပွဲကိုအောင်တာပါ။ ယှဉ်ပြိုင်ရဲတဲ့ သူရဲကောင်းကပဲ အောင်ပွဲကို ရတာပါ။ သင့်ရင်ထဲကို ရောက်လာတဲ့ အိမ်မက်တစ်ခုအတွက် အဆုံးစွန်ဆုံးထိရောက်အောင် သွားမယ်ဆိုတဲ့ သတ္တိမျိုး မွေးရပါလိမ့်မယ်။
ဘီလ်ဂိတ်၊ ဇူကာဘတ်တို့တွေဟာ သူတို့ရဲ့ ယုံကြည်ရာအိမ်မက်တွေအတွက် ထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်တွေကနေ ကျောင်းထွက်ခဲ့ပါတယ်။ စွန့်စားမှုတွေ၊ သတ္တိတွေ ကြီးမားခဲ့ပါတယ်။
သင့်အတွက်ရော? အောင်မြင်ဖို့အတွက် ကျောင်းထွက်စရာတော့ လိုချင်မှလိုပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် သတ္တိရှိဖို့တော့လုံးဝဥသုန် လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
ရွှေညာမောင် (Focus Youth)
ref - focusyouthmyanmar
ခြင်အန္တရာယ်ကို သဘာဝနည်းဖြင့် ကာကွယ်နည်းများ
မျှော်လင့်ချက်များကို အသက်သွင်းခြင်း (ဗဟုသုတ)
ကိုယ်လုပ်တဲ့အရာပဲ ကိုယ်ဖြစ်မယ် (ဗဟုသုတ)
Facebook Messenger ၏ ပြဿနာများနှင့် ဖြေရှင်းနည်းများ
Sony ၏ နားရွက်မှာတပ်စရာမလိုသော အနာဂတ် headphone အသစ်
Android Root Collection 2015-2016
မိမိရဲ့ Android ဖုန်းပေါ်မှ မှားဖျက်မိသော/ပျောက်ပျက...
ပြောင်းလဲလိုသူ တစ်ယောက်အတွက် (ဗဟုသုတ)
အမက်များသည့် အိပ်မက် ၁၀ မျိုးနှင့် ၎င်းတို့ အဓိပ္ပာယ်များ
ကိစ္စတိုင်းမှာ ရွေးချယ်စရာ နှစ်ခု ရှိတယ်။
အလင်းရောင်ဖြင့်အားသွင်းမှု အိန္ဒိယတို့ တီထွင်
အသုံးပြုရလွယ်ကူပြီး အသုံးဝင်မည့် EPI Advanced Serv...
"မှန်ကဲ့သို့" ‪ (ဗဟုသုတ)
Xiaomi Mi4 W/LTE/CDMA > 6.0 တင်ပြီး Root မလုပ်ပဲ Z...
မိုဘိုင်းဖုန်း အသုံးပြုသူတိုင်း သိထားရမယ့် မိုဘိုင...
Samsung Galaxy Tab6MT6572 Firmware@ Flash Tool (...
Viber ချစ်သူများအတွက် အသစ်ထွက်လာတဲ့ဗားရှင်း Viber ...
The.Hobbit.The.Battle.of.the.Five.Armies (2014) မြ...
The Pirate Fairy (2014) မြန်မာ စာတန်းထိုး
ဘယ်ချိန်မဆို ဖုန်းရေစိုသွားရင် ဒါလေးတွေလုပ်ပြီး ဖု...
Wondershare Video Editor 5.1.3 Full version
အချိန်ဟာ အကောင်းဆုံး ဆေးဆရာတဲ့လား?
Samsung Galaxy A5 (2016) SM-A510 ကို Root လုပ်နည်း
ဘ၀မှာ ဘယ်တော့မှ မပြောသင့်တဲ့ စကားတွေ
The.Matrix ( 1999 ) မြန်မာစာတန်းထိုး
အပူဒဏ်ကို ကာကွယ်စေနိုင်မယ့် နည်းလမ်းလေးတစ်ခု
ဖုန်းနဲ့ Projector လုပ်ကြမယ်
Winx Hd Video Converter Deluxe 5.9.4.261 Full Version
သူဘာလို့ ငါ့ထက်သာနေရတာလဲ ?
21.Jump.Street. (2012) မြန်မာစာတန်းထိုး
ဖုန်းရေထဲ ကျသွားရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ....? (သင်္ကြန်နားန...
အမျိုးသမီးတိုင်း မိမိကိုယ်မိမိ ကာကွယ်နိုင်ရန်
လေယာဉ်ပြတင်းပေါက်တွေ ဘာကြောင့် အဝိုင်းပုံစံ ဖန်တီး...
အရည်အချင်းဆိုတာ လေ့ကျင့်မှုက လာတယ်
သင်ဟာ EQ မြင့်မားသူ တစ်ယောက်လား ???
ဦးနှောက်စွမ်းရည် တိုးစေရန် စားသုံးသင့်သည့် အစားအစာ...
ဖုန်းထဲ့ကနေ ကိုယ်​ပိုင်​ 3D Logo စာလုံးအရှင် ပြုလု...